Ithegi: joomla | Martech Zone
NgoMgqibelo, Disemba 12, 2020 NgoMvulo, Novemba 22, 2021 Douglas Karr
Ukuba ujonge ukuvelisa ngakumbi izikhokelo, ukuthengisa, okanye ukubhalisela iindwendwe ezingena kwindawo yakho, akukho mathandabuzo ngokusebenza kwezinto ezivelelayo. Akukho lula njengokuphazamisa ngokuzenzekelayo iindwendwe zakho, nangona kunjalo. Iipopu kufuneka zibekwe ixesha elinengqiqo ngokusekwe kukuziphatha kweendwendwe ukubonelela ngokungagungqi ngamava kangangoko. I-Poptin: Iplatifomu yakho yokungena kwezinto I-Poptin liqonga elilula nelifikelelekayo lokudibanisa izicwangciso zokuvelisa ezinje kule ndawo yakho. Iqonga libonelela:
Ukuzikhethela: Kulula ukuSebenzisa, iiMpawu eziMandla zokuFumana abaThengi beSiza
NgoLwesibini, Juni 25, 2019 NgoLwesithathu, uDisemba 23, 2020 Douglas Karr
Omnye wabathengi bethu uku-Squarespace, inkqubo yolawulo lomxholo ebonelela ngazo zonke iziseko-kubandakanya i-ecommerce. Kubathengi benkonzo yokuzenzela, liqonga elihle elinokhetho oluninzi. Sihlala sincomela ukusingathwa kweWordPress ngenxa yamandla ayo angenamda kunye nokuguquguquka… kodwa kwi-squarespace ekhethekileyo lukhetho oluqinisekileyo. Ngelixa i-squarespace iswele i-API kunye nezigidi zokudityaniswa kwemveliso ezikulungeleyo ukuhamba, usenokufumana izixhobo ezimnandi zokuphucula indawo yakho. Thina
I-OneSignal: Yongeza i-Push Notifications ngeDesktop, i-App, okanye i-imeyile
Lwesine, Okthobha 25, 2018 Lwesine, Okthobha 25, 2018 Douglas Karr
Nyanga nganye, ndiza kufumana amawaka ambalwa eendwendwe ezibuyayo ngezikhangeli zesaziso sokudibanisa. Ngelishwa, iqonga esilikhethileyo ngoku liyavalwa kwaye kuye kwafuneka ndifumane entsha. Okubi nangakumbi, akukho ndlela yokungenisa abo babhalisi bakudala babuyela kwindawo yethu ukuze sizokubamba. Ngenxa yeso sizathu, kwafuneka ndikhethe iqonga elaziwayo nelibi. Kwaye ndiyifumene kwi-OneSignal. Hayi kuphela
Ixabiso eliPhakamileyo lokuSilela koYilo lweWebhu liqheleke kakhulu
NgoMvulo, Julayi 6, 2015 NgoLwesine, Julayi 9, 2015 Douglas Karr
Xa ufunda la manani mabini, uya kothuka. Ngaphezulu kwama-45% kuwo onke amashishini awanayo iwebhusayithi. Kwaye ii-DIY's (Do-It-Yourselfers) eziqala ukwakha indawo, i-98% yazo iyasilela ekupapashweni kwayo konke konke. Oku akubali nenani lamashishini anewebhusayithi engahambisi phambili ... endikholelwa ukuba yenye ipesenti ebalulekileyo. Le infographic evela kwiWebydo ikhomba umba ophambili ngokusilela
I-Bizible ikuvumela ukuba uhlalutye ukusebenza kwe-Adwords yakho ngokusekwe kuguquko kunokuba ucofe, ukuvumela ukuba usebenze ngokukodwa kunye ne-Salesforce yokulinganisa ukusebenza ngokusekwe kwiphulo, iqela lentengiso, umxholo wentengiso, kunye nenqanaba lamagama aphambili. Kuba iBizible isebenza ngokulandela umkhankaso wephulo kuGoogle Analytics, unokulandela umkhondo wamajelo amaninzi kukhangelo, kwezentlalo, ezihlawulelweyo, i-imeyile kunye namanye amaphulo. Iimpawu eziphambili ezidweliswe kwiBizible site AdWords ROI-ikuvumela ukuba ugqibe nzulu kwiAdWords